Ciidamada ilaalada xeebaha Puntland oo soo furtay markab ay afduub u haysteen burcad badeed Somali ah. – Radio Daljir
Ciidamada ilaalada xeebaha Puntland oo soo furtay markab ay afduub u haysteen burcad badeed Somali ah.
Juunyo 3, 2010 12:00 b 0
Bossaso, June 03 – Ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ayaa soo badbaadiyey markabkii ay shalay afduubteen koox buracd badeed Somali ah; markabka oo uu ka walhanayey calanka Panama ayaa magiciisa la yiraahdaa MV QSM Dubai.
Intii uu socaday hawlgalka ciidamada Puntland ay ku soo badbaadinayeen markabka MV QSM Dubai ayaa kooxdii burcadu dileen kabtankii markabka, waxaana sidaas wakaalada wararka ee Reuters u sheegay wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka badda ee Puntland Siciid Maxamed Raage.
Wasiirka oo arintaas ka hadlaya ayaa yiri “Ciidamadayadu waxay weerareen markabkii ku gooshayey calanka Panama, waxaana dhacay dagaal yar inta aan la soo qaban burcada, waxaana xirnay todoba buracad badeed ah, kadib markay dileen kabtankii markabka”.
Markabka la soo furtay ayaa sonkor u waday magaalooyinka Boosaaso iyo Berbera.
Shaqaalaha markabka saarnaa ee la soo badbaadiyey ayaa tiradoodu ahayd 24 qof; waxayna ka soo kala jedaan wadamada Masar, Pakistan, Bangladesh & Ghana.
Qaar ka mid ah Issimada Sool, Sanaag & Cayn oo safar ku tagey Buuhoodle, Cayn.